News Mansarovar » एमाले : विघटन कि पुनर्गठन एमाले : विघटन कि पुनर्गठन – News Mansarovar
जे रोप्यो, फल्ने त्यही हो । अस्वस्थ राजनीति र गुटबन्दी रोप्ने अनि आदर्श दलको अपेक्षा गर्ने ? आज पनि एमालेसँग लाखौं कार्यकर्ता छन्, केन्द्रदेखि वडासम्म जनप्रतिनिधि छन् तर ती जुझारु रहेनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यका शब्दमा, ‘लम्पट’ कार्यकर्ताका कारण नेतृत्व छाडा भएको हो । अझ, आस गरिएका दोस्रो–तेस्रो पुस्ताका नेताहरू नै वृद्ध नेतृत्वको चाकर बन्न तँछाडमछाड गर्ने प्रवृत्तिले निकै पहिले भइसक्नुपर्ने एमालेको पुनर्गठन थाती रहँदै आयो । अहिले फेरि एमाले विघटनको संघारमा छ । यसलाई मर्न दिने कि फेरि नयाँ शिराबाट पुनर्गठन गर्ने ? एमालेसामु यक्ष प्रश्न खडा भएको छ । साभार बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)